Intlanzi yelitye: intlanzi kunye nokufihla okukhulu emhlabeni | Ngeentlanzi
Intlanzi yamatye yaziwa njengenye yeentlanzi ezinobuthi Zonke iilwandlekazi. Zithathwa njengezinobungozi kungekuphela ngenxa yetyhefu yazo enamandla, kodwa nangenxa yomthamo wazo wokuzifihla. Ibizwa njalo kuba iyakwazi ukuzifihla ngokulinganisa ukubonakala kwelitye. Ihlala kumgangatho wolwandle kwaye ihlasele ixhoba, ilibambe lingalindelanga.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into malunga nale ntlanzi ingaqhelekanga kwaye inomdla wokufunda, qhubeka ufunda.
2 Iimpawu zelityefish
Intlanzi yelitye yeyomyalelo I-Tetraodontiformes kunye nosapho lakwaSinancéido. Ngokwemvelo yintlanzi enetyhefu eluma ixhoba layo ithe cwaka kwaye ifihle engxondorheni. Nasebantwini, ukulunywa yile ntlanzi kuyabulala. Lumka ke uyiqonde le ntlanzi ungalunywa.
Ukusukela ekubeni umntu enziwe kwimbali engaphambi kokuzalwa komzingeli ejongene nazo zonke iintlobo zeentlanzi zeentlobo ezahlukeneyo. Zombini ezi ndidi zinobuhle obungenakubalwa, nezinye ezihlasela zingaphazanyiswa okanye zihlaselwe. Le yimeko yeentlanzi zamatye.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-stonefish zihlala zihlala nzulu elwandle kwaye zibekwa apho kukho amatye apho zinokungabonakali khona. Iqwalaselwa njengodidi lweentlanzi ezingaqhelekanga ezinikezwe kunqabile kunye nokubonakala kwazo kunzima.
Ngokwesiqhelo, ukulunywa ngolu hlobo lweentlanzi kuvela kunxibelelwano lwengozi. Ngokufanelekileyo, ngengozi umntu unyathela kuyo, eyiphutha ngelitye, kwaye iintlanzi ziyaluma.
Nangona i-stonefish ikwazi ukuzifihla ngokungathi lilitye, izingelwa ngokulula ziintlobo ezinje ngestingray, iminenga kunye nookrebe abamhlophe. Nokuba imikhomo ebulalayo iyakwazi ukutya ngaphezulu kwe-50 kwezi ntlanzi ngakwenye.
Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-XNUMX zeentlanzi ezinetyhefu, enobuhlungu obungaphezulu kobo beenyoka, kwaye i-stonefish ikwelo qela lineyona inetyhefu.
Elinye lawona malungu ayingozi omzimba wentlanzi yintshona. Yenziwe ngameva ali-13 apho igcina ityhefu enamandla. Esi sigqibo sithathwa njengesixhobo sakho sokuzikhusela kwiimeko ezimbi. Ukutyhefa ixhoba layo, lihlaba ngomphetho wasemqolo kwaye lazise ityhefu ngezihlunu ngendlela ekhawulezileyo nelinganayo.
Ubuhlungu obuqulathe ii-cytotoxins ezahlukeneyo kunye nee-neurotoxins ezenza ukuba ibe yityhefu enamandla ngakumbi kunaleyo yephimpi. Iziphumo zalo zikhawuleza. Okokuqala, ibangela ukudumba okukhulu, njengoko ityhefu isasazeka emzimbeni nakwizicubu zomzimba. Ichaphazela izihlunu ngokungathí sina, izikhubaze ngokukhawuleza kwaye ibangele ukuwa okunamandla, ukuba indlela yothintelo okanye inkqubo yoncedo lokuqala ayithathiwanga, inokukhokelela ekufeni kwiiyure ezimbini.
Olunye lweempawu ezenza ukuba le ntlanzi ikhetheke kangaka thelekisa ubungakanani bayo netyhefu enamandla onayo. Ngokwesiqhelo, iintlanzi ezinetyhefu zincinci kwaye ziyayidinga le tyhefu ukuze zijongane nezisongelo ezinkulu kwaye zichwechwe ngaphandle kwengozi. Nangona kunjalo, nangona itfishfish inkulu kakhulu ngobukhulu, inayo le tyhefu iyingozi.
Ngokobungakanani, kukho iintlanzi malunga neesentimitha ezingama-35 ubude, nangona ezinye zifunyenwe zinama-60 eesentimitha. Ukuba bahlala kwindawo yabo yokuhlala, bathambekele ekukhuleni ngakumbi kwaye bafikelele kubude obukhulu. Ezi ntlanzi zinokugcinwa nakwii-aquariums, kodwa zifikelela kuphela kubukhulu be-25 cm.
Sifumana iintlanzi zamatye ezahlukileyo ngemibala ukusuka kobomvu ukuya ngwevu, ngatyheli, luhlaza, mhlophe nangantsundu. Kuwo wonke umzimba wawo wonke, wenza umahluko wale mibala kwaye kwenziwa umxube owahlula ngamnye kwitoni eyahlukileyo neyahlukileyo.
Ukujongeka ngakumbi njengelitye, injalo amaqhuma alinganisa uburhabaxa obufanayo kwaye ngenxa yoku banokubhideka ngokulula. Inentloko ethe tyaba kwaye iphela ngomlomo omileyo. Amehlo abo mancinci kwaye aqhubeka ngaphezulu kwentloko. Ndiyabulela koku, bayakwazi ukuhoya nayiphi na ingozi.
Yintlanzi ezolileyo nengacacanga. Bahlala bechitha phantse usuku lonke befihle ngasemva kwamatye kwaye bekwazi nokuzingcwaba phantsi kwabo. Xa ujonge ukutya bahlala bema ngakumbi ukulinganisa ukubonakala kwelitye.
Nangona kunjalo, xa enexhoba lakhe kuluhlu, banokuhlasela ngokukhawuleza.
amaqhuma athile. Isekwe kwimimandla eselunxwemeni yolwandlekazi iIndiya kunye nePasifiki, ngendlela efanayo naleyo ifunyanwa ngayo eFalklands, Indonesia, kuLwandle Olubomvu nase Australia.
Ukutya kwabo ngokusisiseko kwenziwa ngamanye iintlanzi, iimollusks, ii-crustaceans kunye ne-shrimp, ukuyenza isilwanyana esidla inyama. Ihlala izingela ixhoba layo ebusuku. Intlanzi ishiya kuphela indawo yayo ekhuselekileyo xa izingela ixhoba. Emva koko ubuyele kuye.
E-China, i-stonefish ithathwa njengeyona intle njenge Iiblowfish. Bona thaca izitya ezahlukeneyo, nangona ingozi yityhefu.
Nangona kungekho lwazi lungako malunga nokuzala, kuyaziwa ukuba iinyanga zabo zokuzala ziphakathi kukaFebruwari noMatshi. Ukwenza oku, babeka amaqanda ngaphezulu kwemingxunya ematyeni. Yibhinqa ebeka amaqanda phezu kweliwa kwaye indoda iyawafaka.
Xa oku kusenzeka, bobabini bahlala ngasemva ukukhusela amaqanda de aqandusele. Nje ukuba i-fry izalwe, ihoywa iinyanga ezine, de ibe nako ukuzikhusela.
Amadoda ngokubanzi bomelele kwaye bakhulu kunamabhinqa. Zihlala zivelisa isandi esenzeka kuphela ngexesha lokudibana.
Njengoko ubona, esi silwanyana singaqhelekanga sinobomi obuzolileyo, sizenza ngathi lilitye. Ke ukuba uhlala kwiindawo apho kufumaneka khona le ntlanzi, lumka ukuba unyathela phi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zamatye